ကူးစက်မှုအစုအဝေးသစ်များ မရှိလာစေရန် ပိုမိုတင်းကျပ်တဲ့ စည်းမျဥ်းကန့်သတ်ချက်များ သတ်မှတ်သွားမှာပါ။
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာ အစဥ်အလာအရ မိသားစုတွေနဲ့ ပြန်ဆုံတွေ့ကြလေ့ရှိတဲ့ Chuseok ဆောင်းဦးရာသီ အားလပ်ရက် သီတင်းပတ်များအတွင်း COVID-19 ကူးစက်မှုအစုအဝေးသစ်များ မရှိလာစေရန် ပိုမိုတင်းကျပ်တဲ့ စည်းမျဥ်းကန့်သတ်ချက်များ သတ်မှတ်သွားမယ်လို့ အစိုးရက ယနေ့ (စက်တင်ဘာ ၂၅ ရက်) ပြောပါတယ်။
အသစ်ထုတ်ပြန်သွားမယ့် ကူးစက်မှုထိန်းချုပ်ရေး စည်းမျဥ်းကန့်သတ်ချက်တွေဟာ လူနေထူထပ်တဲ့ ဆိုးလ်မြို့တော်ဧရိယာအတွင်း နိုက်ကလပ်နဲ့ ဘားဆိုင်များ အပါအဝင် အနည်းဆုံး နေရာ ၁၁ ခုမှာ အကျုံးဝင်ကြောင်း သိရပါတယ်။ စည်းမျဥ်းကန့်သတ်ချက်တွေထဲမှာ ဆိုးလ်ဧရိယာရှိ နိုက်ကလပ်နဲ့ ဘားဆိုင်များကို ပိတ်ပင်စေခြင်းနဲ့ စားပွဲအရေအတွက် ၂၀ ထက်ပိုများတဲ့ စားသောက်ဆိုင်တွေနဲ့ ကော်ဖီဆိုင်တွေမှာ စားပွဲတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြား အနည်းဆုံး တစ်မီတာ (၃ ပေကျော်) အကွာအဝေးရှိစေခြင်းတို့ ပါဝင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့က အဆုံးအဖြတ်ပေးသွားမယ့် အရေးကြီးတဲ့ အလှည့်အပြောင်းကာလကို ရောက်နေပါတယ်
ကန့်သတ်ချက်တွေအရ ဘုရားကျောင်းအားလုံးကို အွန်လိုင်းဖြင့်သာ ဆက်လက်ခွင့်ပြုထားပြီး ရုပ်ရှင်ရုံနဲ့ ကဇာတ်ရုံတွေကိုမှာ တစ်ခုံခြားသာ လက်မှတ်ရောင်းခွင့်ပြုပြီး လာရောက်ကြည့်ရှုသူအားလုံး mask တပ်ထားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အတူ အဆောက်အအုံအတွင်း လူစုလူဝေးကို လူဦးရေ ၅၀ အထိနဲ့ အဆောက်အအုံပြင်ပမှာ ၁၀၀ အထိဖြင့် ကန့်သတ်ထားပြီး အားကစားပြိုင်ပွဲတွေကို ပရိသတ်လာရောက်ကြည့်ရှုခွင့် တားမြစ်ပိတ်ပင်ထားပါတယ်။
(Photo: DT Next)
ယခု စည်းမျဥ်းကန့်သတ်ချက်အသစ်တွေကို စက်တင်ဘာ ၂၈ ရက်နေ့မှ အောက်တိုဘာ ၁၁ ရက်အထိ သတ်မှတ်ထုတ်ပြန်သွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။ ထိုကာလအတွင်း အောက်တိုဘာ ၉ ရက်နေ့ဟာလည်း Hangul Day ခေါ် ကိုရီးယားဘာသာစကားရဲ့ အက္ခရာတွေကို ဖန်တီးခဲ့သူ ဘုရင် Sejong (King Sejong) အောက်မေ့ဖွယ်နေ့ အားလပ်ရက်ဖြစ်ပါတယ်။
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဟာ ကနဦး COVID-19 ကူးစက်မှုတွေကို ကောင်းစွာထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီး လုံးဝ lockdow လုပ်ရမယ့်အရေး ရှောင်လွှဲနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ သို့သော် ဩဂုတ်လအတွင်း ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့နဲ့ နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ စုရုံးချီတက်ပွဲမှာ ကူးစက်မှုတွေ တွေ့လာရပြီးနောက် တောင်ကိုရီးယားရဲ့ အကြီးဆုံး COVID-19 ကူးစက်ဖြစ်ပွားမှု ကြုံတွေ့ခဲ့ရကာ ကူးစက်မှုထိန်းချုပ်ရေး အာဏာပိုင်တွေက လူအချင်းချင်း ခပ်ခွာခွာနေရမယ့် စည်းမျဥ်းကန့်သတ်ချက်တွေ ထုတ်ပြန်ဆောင်ရွက်ခဲ့ရပါတယ်။
ကူးစက်မှုတွေ အမြင့်ဆုံးပြန်ဖြစ်ခဲ့စဥ် ဩဂုတ်လကုန်ပိုင်းမှာ တစ်ရက်လျှင် အတည်ပြုလူနာ ၄၄၀ ကျော်ရှိလာခဲ့ပြီး ထိုနောက်ပိုင်းမှာတော့ ကူးစက်မှုတွေ ပုံမှန် လျော့ကျနေခဲ့ပါတယ်။ သို့သော် တာဝန်ရှိသူတွေက စက်တင်ဘာ ၃၀ ရက်မှ အောက်တိုဘာ ၂ ရက်အထိ အားလပ်ရက်များအတွင်း နောက်ထပ် ကူးစက်မှုမြင့်တက်လာမှာကို စိုးရိမ်ပူပန်နေပါတယ်။
ခပ်ခွာခွာနေရမယ့် စည်းမျဥ်းကန့်သတ်ချက် အဆင့် ၁ ကို ပြန်သွားနိုင်မလား? ဒါမှမဟုတ် နောက်ထပ် COVID-19 ကူးစက်ဖြစ်ပွားမှုကြီး ပြန်ဖြစ်လာမလားဆိုတာကို အဆုံးအဖြတ်ပေးမယ့် အရေးကြီးတဲ့ကာလပါ
"ကျွန်တော်တို့က အဆုံးအဖြတ်ပေးသွားမယ့် အရေးကြီးတဲ့ အလှည့်အပြောင်းကာလကို ရောက်နေပါတယ်၊ ခပ်ခွာခွာနေရမယ့် စည်းမျဥ်းကန့်သတ်ချက် အဆင့် ၁ ကို ပြန်သွားနိုင်မလား? ဒါမှမဟုတ် နောက်ထပ် COVID-19 ကူးစက်ဖြစ်ပွားမှုကြီး ပြန်ဖြစ်လာမလားဆိုတာကို အဆုံးအဖြတ်ပေးမယ့် အရေးကြီးတဲ့ကာလပါ" လို့ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီး Park Neung-hoo သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ပြောပါတယ်။
အများပြည်သူအနေနဲ့ အားလပ်ရက်အတွင်း အွန်လိုင်းကနေပဲ ဘိုးဘွားတွေရဲ့ သင်္ချိုင်းတွေကို ဂါရဝပြုကြရန်လည်း ဝန်ကြီးက တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ ဘိုးဘွားတွေရဲ့ သင်္ချိုင်းတွေကို သွားရောက်ဂါရဝပြုခြင်းဟာ Chuseok အားလပ်ရက် အဓိက ထုံးထမ်းအစဥ်အလာတွေအနက် တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
တောင်ကိုရီးယား ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးနဲ့ တားဆီးကာကွယ်ရေးဌာန (Korea Disease Control and Prevention Agency) က ကြာသပတေးနေ့ (စက်တင်ဘာ ၂၄ ရက်) ညသန်းခေါင်အချိန် ထုတ်ပြန်ချက်အရ COVID-19 ကူးစက်ခံရသူ ၁၁၄ ဦး တိုးလာခဲ့ပြီး လက်ရှိအချိန်အထိ ကူးစက်ခံရသူ စုစုပေါင်း ၂၃,၄၅၅ ဦးနဲ့ သေဆုံးသူ ၃၉၅ ဦးရှိကြောင်း Reuters သတင်းက ဖော်ပြပါတယ်။